shirkii PCAB been - SHENZHEN KAISHENG PCB CO., LTD
Daabacaadda PCB Iyo Golaha - PCBFuture
Keyword: Been abuur PCB, shuruudaha kulanka PCB, Shirka PCB ee Turnkey
Haddii aad u baahan tahay isku-darka PCB, been-abuurka PCB, shixnadda shixnadaha ama isku-soo-ururinta alaabada wax soo iibsiga, PCBFuture waxay leeyihiin waxa lagama maarmaanka u ah in lagu maareeyo mashruucaaga oo dhan si hufan. In ka badan 15 sano oo khibrad ah oo aan u leenahay adeegyada PCB, waxaan baranay in qiimaha isku imaatinka macquulka ah, adeeg tayo sare leh, bixinta waqtiga iyo isgaarsiinta wanaagsan ay yihiin furayaasha farxad geliya macaamiisheenna waana sida aan ugu guuleysannay ganacsigeenna.
Maalgashi muhiim ah oo ku saabsan qalabka ayaa loo baahan yahay in la sameeyo ka hor inta qalabka elektarooniga ah aan si xirfad leh loo dhigin loona iibinin looxyadaada daabacan sida daabacadaha stencil otomaatiga ah, mashiinada soo qaado iyo meesha, foornada dib u cusbooneysiinta, mashiinnada indhaha ee kormeerka tooska ah (AOI), mashiinnada raajada, mashiinada wax lagu xusho ee la xushay, mikroskoobyada, iyo saldhigyada wax lagu qoro.
Sababtoo ah waxaa naga go'an inaan la kulanno waqtigaaga hogaaminta iyo shuruudaha tayada waxaan si joogto ah u maalgashaneynaa tiknoolajiyada ugu dambeysa ee SMT iyo qalabka daloolka.
Maxaad noo dooratay Been Abuurista PCB Iyo Golaha:
1. Koox heer sare ah oo injineero ah, barnaamijyayaal, hawl wadeenada SMT, farsamo yaqaanada wax iibiya iyo kormeerayaasha QC.
2. Xarun casri ah oo leh qalabkii ugu dambeeyay ee SMT iyo qalabka daloolka oo aan haysanno agabyada ugu fiican ee lagu buuxin karo dhammaan shuruudahaaga kulan PCB.
3. Waxaan ku siin karnaa adeegga PCB-ga loo yaqaan 'turnkey PCB' kaasoo bixin doona looxyada ugu fiican ee daabacan ee mashaariicdaada ah.
4. Tixraacid casri ah & dalbo nidaam online ah.
5. Waxaan takhasus gaar ah u leenahay yar yar iyo dhexdhexaad dhexdhexaad ah oo leh waqtiyada hogaaminta degdegga ah.
6. Bixiyaan alaab iyo adeegyo tayo sare leh oo ay ku keenaan waqtigii loogu talagalay oo ah qiimo aad u tartan badan.
7. Dhammaan kombuyuutarradeena PCBs waa UL iyo ISO shahaado laga haysto.
8. Dhammaan Noocyada Noocyada PCB-yada ee loo yaqaan 'Standard Spec PCBs' waxaa loo dhisay IPC-A-6011/6012 dib-u-eegiddii ugu dambeysay ee Fasalka 2 iyadoo kormeer lagu saleynayo IPC-A-600 Class 2 dib-u-habeyntii ugu dambeysay, marka lagu daro shuruudaha macaamiisha la cayimay.
9. Dhammaan Noocyada Noocyada Daabacan ee Daabacan Wareegyada waxaa lagu tijaabiyaa koronto ahaan.
Waxaan bixin karnaa adeeg:
Hal guddi FR4
Loox FR4 laba geesood ah
Tikniyoolajiyad sare oo indhoole ah oo lagu aasay looxyo
PCBFuture waxay leeyihiin taageerada adeegga injineerka. Sida PCB & Soo saaraha golaha PCBma socon karo hadaan la helin taageerada injineer. Kooxdayada injineerada waxay ka kooban yihiin injineero khibrad badan leh. Ku dhowaad dhammaan alaabada caanka ah waxay khibrad u leeyihiin taageerada wax soo saarka. Khibrad soo saarid marka laga reebo, injineernimada rogista dhammaantood waxay ku jiraan adeeggooda. Injineer waxay had iyo jeer siiyaan taageero xoog leh kulanka PCB.
Soo-saarista & Isku-xirka PCB-ga lagu kalsoon yahayIn ka badan 2000 shirkadood ayaa nala shaqeeya maxaa yeelay waxay u maleynayaan inaan isku halleyn karno. Hadda, qaar badan oo ka mid ah tixraacyo uga imanaya macaamiisha qanacsan. Tikniyoolajiyaddii ugu dambeysay awgeed, waxaa suurtagal ah in la farsameeyo oo la hirgeliyo mashaariicdaada si hufan oo hufnaan iyo mustaqbal caddayn ah. Walaaca macaamiisha had iyo jeer waa diiradda!